विद्रोहको रात | मझेरी डट कम
आज धर्ती दुख्यो । माटो दुख्यो । बैरी हावाको कुत्सित मनसायले आफ्नो अधिकार ! अधिकार ! भनी भजाएर साम्प्रदायिकता हुल्याइरहेछन् । स्वाभिमान भनी मनको टुटुल्को उठ्ने गरी गिजोलिरहेछन् । सबैलाई एकजुट हुन दिन उनीहरु कहिल्यै चाहँदैनन् । चेतनाको प्रवाहलाई विजोग बनाउनु नै शासकहरुको रणनीति भइरहेको छ । कहिल्यै भाषिक अधिकार भनेर जनाताहरु विभाजित हुन्छन् अनि त उनीहरु दङ्ग हुन्छन् । त्यस्तै कहिल्यै प्रादेशिक अधिकार भन्दा पनि उनीहरु झन् दङ्ग हुन्छन् । अझ धार्मिक अधिकार भन्दा त उनीहरु झनझनैै दङ्ग हुन्छन् । विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरु जति बढ्न थाल्छन् उनीहरुको रवाफ बढ्दै जान्छ र उनीहरु मैमत्त भएर ढुक्क हुन्छन् । यस्ता कुराहरुले उनीहरुको कुत्सित सोचाइ सफलिभूत भएकाले उनीहरु झनै प्रफुल्लित भइरहेका छन् । त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको सारा जनता एकै ठाउँमा गोलबद्ध भएर सञ्चारित हुनु नै हो । यस्तोमा पनि उनीहरुले अलिकति प्रगती गर्दा पनि सर्वसाधारणलाई एकले अर्काको खुट्टा तान्न दिएर, उनीहरुको स्वार्थी मनोवृत्तिले पक्का जीत हासिल गर्यो भनी दङ्ग हुन्छन् । यी बैरीहरुका आफुमात्र मोज लुट्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध सबै जुझारु भई लम्कनु आजको आवश्यकता हो ।
२०६१ फागुन ४
आज उसको सुत्ने मनसाय छैन । कौतुहलताका साथ उसको लक्षको प्रतिक्षामा छ ऊ । रातमा उसले यसरी डायरी लेखिसकेपछि मनमनै सोच्यो कि “सारा विश्व एक प्रदेश एक भाषा, एक गाउँ । यही नै हो आजको चूरो । एकजूट हुने नारा यसैमा हुन्छ । सबैमा आत्मियता अनि भाइचारा ।” त्यसपछि रातको १ बजे पार्टी प्रवेशको कार्यक्रममा उसलाई जानुनै पर्ने थियो । ऊ हिँड्यो सुनसान चकमन्न रातमा त्यतैतिर, उसलाई भनिएकै ठाउँमा, गाउँमा कसैलाई पनि नभनी, गाउँका कसैलाई सुइँको पनि नदिई सुटुक्क त्यतैतिर लम्कियो । ऊ त्यो कार्यक्रममा ज्यान हत्केलामा राखेर त्यहाँ पुग्दा जोशिला स्वरहरुले आम जनसमुदायमा उन्माद रन्किरहेको थियो । उनीहरुको शिरका टोपीका ताराहरु चम्किरहेका थिए । त्यस्तै गरी आकाशमा पनि ताराको जन्ती नै देखिन्थ्यो ।
प्रभात उदाउने स्वदेश भन्दैछौँ हामी ।
स्वाभिमानी भई देशको पहिचान दिँदैछौँ हामी ।।
आफु जन्मेको रक्तिम धर्तीलाई बाँझो नपारी,
एक मुठ्ठी सास रहेसम्म अथक परिश्रम गर्दैछौँ हामी ।
पुर्खौँ देखिको सङ्घर्षको श्रमको बोली बोली,
त्यही भाषामा स्नेहित भई रमाइरहेछौँ हामी ।
को उँच को नीच सबै नागरिक एकै बनी,
सदासदा समानताको नारा लगाउँदैछौँ हामी ।
सामन्ती शासनको मूल जरो नै राजतन्त्रे भनी,
जनगणतन्त्र नेपाल ! धेरै प्यारो नेपाल सदा भन्दैछौँ हामी ।
त्यसपछि शहीद नायिका योद्धाका विदुर पतिहरुले एकदम साहसका साथ अग्र पङ्क्तिमा आई, सबैले रातो झण्डा फहराए । उपस्थित सबैले गडगडाहटका साथ ताली पड्काएर उल्लासपुर्ण रुपले कर्तल ध्वनीका साथ समर्थन जनाए । फेरि सबैले एकै स्वरमा गाउन थाले आफ्नी प्राण प्यारीलाई सम्झी ।
हे सखी ! हे सखी ! तिमीनै मेरो विश्वास,
मेरी प्राण ! मेरी मुटु ! तिमी मित्र सबै तिमी,
छैन मेरो सामन्ती सोच,
छैन मेरो सामन्ती संस्कार,
छ ममा समभाव !
छ ममा हाम्रो भाव,
फेरि अझ ठुलो स्वरमा उनीहरुले स्वर बढाए । स्वरमा स्वर मिलाए ।
सुनिदेऊ मेरो भाव,
सवको सुख साम्यवाद,
एक ढल्यौ त पराजित गर्न हजारौँ उठेका छौँ,
लाखौँ जुटेका छौँ,
करोडौँको ढुकढुकी बनेका र्छौँ,
विश्वलाई एक गर्न रौसिएका छौँ ।
त्यसपछि फेरि सबैजना सतर्क ! सतर्क ! भन्दै मार्चपासमा उत्रिए । सियो झर्दा पनि आवाज नआएसरि बसी शहीदहरुप्रति मौनधारण गर्न थाले । मौनधारण सक्नेवित्तिक्कै फेरि माइकमा जोशिलो, योद्धिलो आवाज आउन थाल्यो ।
.....विद्रोहको झण्डा गाडिसकेपछि आवाज, रोकिएर अनि दबाएर रोकिन्न । सामन्तका पिँजडामा थुनिएकाहरु सास फेरी हेर झन्झन् भै जुझारु ! तिम्रो एक झिल्कोले थोरै अन्धकार मेट्नेछ । त्यसैको उर्जाले सबैतिर झिल्को बल्नेछ । क्रान्तिको ज्वाला दन्किनेछ । शहीदको मुहारमा लालीमा मुस्कान आउनेछ । देशले, अन्तराष्ट्रियले नयाँ उज्यालो पाउनेछ । फेरि नयाँ शुद्धिलो युग, फेरि नयाँ शुद्धिलो विहानी, सदासदाका लागि आउनेछ । सदासदाका लागि धर्ती रम्नेछन् । सुरम्य हुनेछन् ।..........
विहानी प्रभात हुन तब धेरै समय बाँकी थिएन । फेरि एक जत्था युवाहरु (जसमा ऊ सामेल थियो) पार्टी प्रवेश गर्नका लागि अध्यक्ष कमरेडका हातबाट रातो टीका लगाउन शुरु गर्न थाले । टीका लगाउने वित्तिक्कै उनीहरु गर्वले राँकिरहेका थिए र उनीहरुका तर्फबाट एकजना प्रतिनिधीले बोल्ने पालो आएको थियो । त्यहाँ उसैले बोल्ने सहमत भयो । ऊ माइकमा गयो र बोल्न थाल्यो,
.....सबै जनालाई लाल अभिवादन !!
मेरा कोही शत्रु छैनन् म त अजात शत्रु भन्थेँ । तर सामन्त मेरा शत्रु रहेछन् बल्ल थाहा पाएँ । सङ्ग्लो पानी धमिल्याउने धुपौरे, छुपौरे यिनै हुन् । कसैको हाडछाला घोटेर पनि आधा पेट खान पुग्दैन । तर उनीहरुको भने हिँड्न नहुने गरी भुँडी बढेको छ । कसैको ओत लाग्ने घर हुँदैन । उनीहरुको महल र दरबार छ । हामी सबैको यस्तै हालत छ । निमिट्यान्न पार्नुपर्छ यी सामन्तीहरुलाई । हामी सब मिलेर अनि समानताको युगमा नयाँ, ताजा, स्वच्छ वैरभाव नभएको एकै परिवारको सफल समाज निर्माण गर्नु छ । यही हो हाम्रोे अठोट ! कसैको छैन यसमा दुईमत । यही वैरी बिनाको समाज उद्धार गर्ने हाम्रो प्रतिवद्ध हो । विशुद्ध सङ्कल्प हो ।.......
यत्ति भनीसकेपछि सबैजनाले मुठ्ठी कसेर अभिवादन गरे । फेरि अन्तिम वक्ताका रुपमा अध्यक्ष कमरेड आए ।
.......अहिले रातो सुर्य उदाउनै लागेको छ । हामी अबको यो भाषण सक्नेवित्तिक्कै आफ्नो उद्देश्यका लागि ज्यान हत्केलामा राखी तितरवितर भई एकदम सजगताका साथ देश र जनताका कर्तव्यका लागि आआफ्नो ठाउँमा डट्नेछौँ । हामीहरु एकदमै दुःख पाएका जनताहरुका लागि ज्यानको बाजी थापेर लागिपर्नेछौँ । यस्तो जीवन दिनेलाई सबैले सुन्दर देख्दछन् । हावाको लहरले सास दिएर जीवन प्रदान गर्दछ । वाफ वादल भएर वर्षा दिन्छ । पानीले तीर्खा मेटाउँछ , प्यास हटाउँछ , झरनाको कलरव गुञ्जन गराउँछ । प्रकृतिलाई हराभरा तुल्याउँछ । वसन्तबहार सदासदा ल्याउँछ । हामीले पनि यो शिशिररुपी समाजलाई वसन्त दिनु छ । जस्तो उज्यालोले अदृष्य सबै हटाएर दृष्य दिन्छ । प्रकृतिले रङ्गीन छटालाई उजागर गराउँछ । नयनको महत्त्वलाई बढाउँछ । हामीले त्यस्तै सत्यले जनताका अधिकार देखाइदिनुपर्छ र उनीहरुको कर्तव्य अनि अधिकारतर्फ समाधान न्यायिक किसिमले दिलाइदिनुपर्छ । त्यस्तै चराको चिरचिरविरविर आवाजले विहानीको सुवासको आभाष दिलाउँछ । सातसुरको सङ्गीतको मीठासले जनताको श्रवणको मीठास उजागर गराउँछ । कर्णको महत्त्वलाई यसरी बढाउँछ । यही चरा हौँ हामी, सुगा मैनासरि पिँजडामा जकडिएकाहरुको उद्धार गर्न एकदम सासहसका साथ, एकदम धैर्यताका साथ, एकदम सहनशील भई, एकदम कर्मठ भई हरतरहले लागिपर्नु पर्छ । पहाडले मधुर उपत्यका दिन्छ । धरतीले वास दिन्छ , बादलले आकार दिन्छ । गगनले शुन्यमा अनन्त छानो दिन्छ । हिमालले सदा सित्तलता टलक दिन्छ , आधार दिन्छ । हामी पनि यसरी नै जनताका लागि, देशका लागि जुटौँ, उठौँ, डटौँ, बढाैँ ।
लालसलाम !! ........
रातो किरण आउन आउन आँटेको प्रसव पीडा झैँ देखिन्थ्यो । सबैजना जोस्सिएर गन्तव्यतिर लम्कन जुमुराउँदासम्म रातो प्रभातको लालीमा सबै प्यासीतिर सिञ्चित भइसकेको थियो । सबैजना एकैसाथ रातो किरणसरि उज्यालोका साथ तितरवितर भए ।
२०७७ कात्तिक २९ शनिवार
प्रतिक्रियाका लागि [email protected]
फुल्नेछन् सपनाहरू एक दिन
तीन मुक्तक (आफैलाई बरिष्ठमा)
हेपी भ्यालेन्टाइन डे
यति छिटै जिन्दगीका पाटाहरू फेरिएछन
व्यावहारिक व्याकरण कृति
सबै बेहोसी नशा पिएर
पोखरामा सिर्जना पोखियो
नेपाली गजलमा सबैभन्दा बढी शेर भएको गजल (बहरमा)
तिम्रो जस्तो मुटु
विदेशमा गाउँघर र तिहार सम्झदै
मधुरस कविता बिमोचन कार्यक्रम